Kubuda ropa ma radiator: sei uye riini kuzviita uye chii chaicho | Green Renewables
Ichauya zvirokwazvo nguva iyo ma radiator ako asingapise zvakanaka sezvavakaita pakutanga. Izvi zvinogona kuitika sezvo mweya uchiwanzo kuunganidzwa mukati meyese kudziya sisitimu uye wotanga kutadzisa kutenderera kwemvura kunoitisa kupisa ma radiator. Kugadzirisa dambudziko iri unofanirwa kudzidza ku akabuda ropa ma radiator. Uku kudzivirira radiator kubva mukuburitsa kupisa nenzira yakasarudzika. Inowanzo kurudzirwa nguva yega yega yechando isati yadeura maredhiyo kuti udzivise dambudziko iri.
Neichi chikonzero, isu tiri kuzotsaurira ichi chinyorwa kukuudza maitiro ekuchenesa ma radiator uye chii chakakosha icho.
1 Kukosha kweradiators anobuda ropa
2 Rini uye sei kubuda ropa ma radiator
3 Otomatiki mavharuvhu uye hydraulic vakadengezera
Kukosha kweradiators anobuda ropa
Sezvatakambotaura pakutanga kwechinyorwa, zvinokwanisika kuti ma radiator anotanga kuunganidza mweya uye kutadzisa kutenderera kwemvura inopisa ma radiator. Izvi zvinokonzeresa kuti irege kuburitsa kupisa zvakaenzana, saka zvinokurudzirwa kutanga kubuda ropa ma radiator. Kuita izvi kunosanganisira kubvisa mweya iri iro basa redunhu rese rediyeta. Neiyi nzira, inokwanisa kuvandudza mashandiro esimba emagetsi ekupisa uye kugadzirisa mashandisiro emagetsi.
Iko kushanda kwesimba kunowedzerwa mukuisa kwekupisa uye kudzikiswa kwemheremhere yekunze. Zvakajairika kana paine mweya wakaunganidzwa kubva kumidziyo yekupisa kuti unzwe ruzha rusinganzwisisike kana uchibatidza kudziya. Mheremhere idzi dzinowanzonzwikwa semhere mhere inokonzereswa nemabhuru emhepo akaunganidzwa mukati meiyo kupisa system. Ichi ndicho chiratidzo icho inonongedza kuti zvakakosha kudeura ma radiator mwaka wekupisa usati watanga.
Kana redhiyeta yatanga kupisa zvisina kunaka, iyo thermostat haina kubuda asi iyo nzvimbo inoramba ichishanda. Izvi zvinoitika nekuti hazvigone kusvika patembiricha yakatemwa. Izvi zvinoita kuti bhaira rishande zvakapetwa uye rinokonzeresa kushandiswa kwesimba zvakanyanya kubvira iyo yekudziya sisitimu haisi kushanda zvakanaka. Muzviitiko izvi, zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti yedu yekuisa yekuisa inoshanda nemazvo. Iyo inoshanda yekupisa sisitimu inodzivirira kutambisa simba kuchengetedza yakawanda mukushandisa.
Rini uye sei kubuda ropa ma radiator
Mwedzi yakanakisa yekufema radiator ndiGunyana naGumiguru, mwaka wekupisa wakasimba usati watanga. Zviri nyore kwazvo kuti tinoda kuchipisa pasina kumirira kuti tembiricha idonhe, nekuti kana tisina kuichenesa pamberi, zvinoshanda "nehafu yegasi", nokudaro kutambisa simba nemari. Ngationei matanho api ekudzidza kubuda ropa ma radiator. Maitiro akareruka uye iwe unofanira kungoteedzera aya matipi:
Tarisa uone kana iwe uchida kubuda ropa ma radiator ako: Kuti uite izvi, unofanirwa kubatidza kudziyisa uye kupfuudza ruoko rwako pamusoro. Kana chikamu ichi chakatonhora kupfuura chezasi, zvinoreva kuti pane mweya unofanirwa kusimuka uye uri kutadzisa dunhu.
Iwe unofanirwa kutanga neiri radiator padyo neaboiler. Zvese mashandiro anotanga neiri radiator padyo neboiler sezvo kuerera kwemvura kunofanirwa kuteverwa.
Isa mudziyo pasi pe stopcock: zvakanakisa kusarudza girazi remvura woiisa pasi petepi. Aya ndiwo maitiro atingaite kuti ivhu risanyorove kana mvura yatanga kubuda.
Kiyi inoshandurwa ne screwdriver: Mari yemari inogona zvakare kushandiswa kuvhura pombi yevhavha. Pakutanga mweya unobuda kana tangovhura pombi unonhuwirira. Kubva pano isu tinogona zvakare kuona imwe yemvura kubva mujeti ichiri kusazove yunifomu.
Iyo pombi inofanira kuvharwa kana jet iri fluid: Kana iyo jeti yemvura ichibuda yakakwana mvura uye yakafanana, tinofanira kuvhara pombi, nekuti zvinoreva kuti mweya watobuda, saka isu tinongofanirwa kuvhara pombi nenzira yakatarisana.
Iko mashandiro anofanirwa kudzokororwa kune ma radiator ese: Rangarira kuti zvakakosha kutevedzera radiator neredhiyo yekuyerera kwemvura zvakasikwa. Kana chero ma radiator apfuura, hazvidi kuti uite mashandiro.
Chekupedzisira, zviri nyore kutarisa kumanikidzwa kweboiler. Inofanira kunge iri pamitengo yehafu nehafu nehafu kubhawa sezvo mushure mekuchenesa danho rekumanikidza rinodonha. Izvo zvakakosha kuti iro rekumanikidza danho riri pamatanho aya.
Kana iwe usiri kuda kuita ese mashandiro uri wega kana wega, unogona kufonera nyanzvi inosvika kubasa uye inogona zvakare kutarisira kuchenesa iro rese redhiyeta uye kurisiya rakagadzirira mwaka wekupisa wakanyanya.
Otomatiki mavharuvhu uye hydraulic vakadengezera
Yemazuva ano kudziyisa masisitimu anogona kunge aine otomatiki vharafu ine otomatiki chiutsi system. Rudzi rwevhavha iyi inoburitsa mweya rwoga, saka hazvidiwe kuti ubude ropa nemaoko. Kana kunyangwe nemhando idzi dzemavharuvhu, iwe waona kuti redhiyeta haina kupisa zvakanaka, nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza, zvakanaka kubvunza nyanzvi kuti utarise system yacho.
Kana radiator isiri 100% inopisa, zvinoreva kuti iyo yekudziya sisitimu haigone kushanda nemazvo, izvo zvinokonzera kusakosha zvisina kufanira kwesimba. Iyo inoshanda yekudziya sisitimu inogona kudzivirira kupedza simba uye nekudaro chengetedza simba. Pamusoro pekuchenesa ma radiator, mamwe matanho anogona kutorwa kuti awane kuita kwakanaka kubva kune aya ma radiator.
Kana isu tichitaura nezve epakati kudziisa kumisikidza, kune chirongwa chinogona kuitiswa nyore kuona kuti ma radiator ese anowana mvura inodiwa kuti vashande, izvi zvinodaidzwa hydraulic vakadengezera. Iyi ndiyo nzira inofanirwa kuitwa neanokwanisa emagetsi installers, zvikasadaro matambudziko akasiyana anogona kuitika panguva yekumisikidzwa.
Pane zvakawanda zvakanakira hydraulic chiyero:
Kune rimwe divi, iyo inobvumira kuyerera kwakaringana kwemvura kuti isvike ma radiator ese.
Tora thermostatic mavharuvhu ekugadzirisa tembiricha
Chekupedzisira, iyo chaiyo hydraulic chiyero inogona kudzivirira manzwi anotsamwisa panguva yekuisirwa.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezvekuti uye riini kubuda ropa maredhiyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Kumba Economics » Akabuda ropa maharairi
Heterotrophs: zvavari uye hunhu